Kukavayika Masvomhu - Wikipedia
(Redirected from Zengeya masvomhu)
Dariro 1. Mutaro mutsvuku uyo mupango wa x unonyorwa wakanzi f(x)
Muchidzidzo cheMasvomhu, Kukavayika (variability, changableness in English) muitiro wokuti munhu kana chinhu chinoshanduka pamafungiro, huwandu, mumhu hwechinhu chiri kupimiwa. Chacho chine huwandu kana mumhu uri kupimwa chinonzi zengeya kana kuti variable kuEnglish.
Somuenzaniso tinokwanisa kupima nhambwe yafambwa nebhazi kubva kwaMutoko kuenda kwaMurehwa. Nhambwe yafambwa inosiyana nekupfuura kwenguva uye spidhi yebhazi. Pamucherechedzo uyu nhambwe yafambwa, nguva yafambwa, uye spidhi yebhazi zvose zvikavayika zviri kushanduka takatarisana nenharaunda iri kucherechedzwa.
Muenzaniso wemutaro une zvikavayika X na Y wakapiwa paDariro 1 riri kurudyi iro.
Variable inenge yonzi chikavayika, uye kana kuti zvikavayika pahuwandu.
Y varies with X kunenge kwonzi Y izengeya rinotodza X.
MuDariro 1, X chikavayika chakasununguka, Y chikavayika chakasunungwa.
Chikavayika chakasununguka ndiro rinomirira nhutirwa dziri kupinda munharaunda iri kucherechedzwa.
Chikavayika chakasungwa ndiro rinomirira nhururwa dziri kubuda munharaunda iri kucherechedzwa.
Chikavayika chakasununguka ihonzeri yezvinobuda. KuEnglish ndiyo independent variable.
Chikavayika chakasungwa chisakwa kana kuti mhedzisiro yezvapinda. KuEnglish ndiyo dependent variable.
Hukama huripo pakati pa X na Y hunotsanangurwa nemupango.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kukavayika_Masvomhu&oldid=58139"
This page was last edited on 10 Chikunguru 2018, at 22:08.